निर्वाचन लक्षित सप्तरीमा छ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन ! – Everest Dainik – News from Nepal
निर्वाचन लक्षित सप्तरीमा छ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन !
राजविराज, भदौ २३ । प्रदेश नं २ मा अगामी असोज २ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित बनाउनका लागि सप्तरीमा करिब छ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहका अनुसार निर्वाचन अवधिभर जिल्लाभरिमा चार हजारभन्दा बढी जनपथ प्रहरी परिचालन गरिएको बताएका छन् ।
प्रत्येक मतदान केन्द्रमा प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा सात/सातजना सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइएको छ भने गाउँपालिकामा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा पाँच÷पाँचजना सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइएको प्रहरी उपरीक्षक यादवले बताए ।
यता मतदान हुने दिन असोज २ गते सुरक्षा व्यवस्थाका लागि मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना गरी तीन घेरा बनाएर सुरक्षा दिने प्रहरी उपरीक्षक सिँहले भन्नुभयो । आवश्यकता परेकामा थप प्रहरी छिमेकी जिल्लाबाट ल्याउने उनले बताए ।
असोज २ गते प्रदेश नं.२ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सप्तरीमा स्वतन्त्रसहित कुल पाँच हजार ६८३ जना विभिन्न राजनीतिक दलका उमेदवारको उम्मेदवारी परेको छ ।